Aagagga qaarkood waxaa ka jiri kara fursad ah in aad ka qeyb qaadan kartid wax ka mid ah mashaariicdaas aan tusaale ahaan isla wadno laacibiinta kale. Kuwan aan wada shaqeynta leennahay waxay tusaale ahaan noqon karaan shirkad, degmo ama urur. Hawlaha wax qabadku waxay soconayaan intii waqti go’an ah, waxayna leeyihiin ulajeeddooyin iyo hadafyo go’an. Waxay taasi ku saabsanaan kartaa in la tijaabiyo hawlo wax qabad oo cusub oo aan ku jirin waxyaabaha aan caadi ahaan bixinno, ama in la hormariyo qaab cusub oo ku aaddan in shaqo la raadsado. Waxa ku jira iyo waxyaabaha la qabanayo wey kala duduwanyihiin iyadoo taasi ku xiran mashruuca, waxayna taarget-gareysan karaan kooxo gaar ah sida dhallinyaro, dad da’ ah ama dad ku jira barnaamijka saldhigashada. Ulajeeddada laga leeyahay mashruucu waa in la xoojiyo fursadahaaga ku aaddan in aad shaqo heshid.
Ugu badnaan lix bilood ayaad ka projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning suuqa shaqada. Waqtigaaga mashruuca waa la kordhin karaa haddii aan u aragno in ay taasi kor u qaadeyso fursadahaaga ku aaddan in aad shaqo heshid.
Mashruuca ku jiheysan siyaasadda la xiriirta suuqa shaqadu waa mid loogu tala galay adigaaga shaqo la’aanta ah ama khatarta ugu jira in aan shaqo la’aan noqotid. Maadaama waxa ay ka koobanyihiin iyo hawlaha wax qabadku uu kala duduwanyihiin iyadoo taasi ku xiran mashruuca iyo kooxaha loo gol leeyahay ee gaarka ah way kala duwanaan karaan cidda uu mashruucu ku habboonyahay.
Waxaad u baahantahay in aad shaqadoon ahaan nooga ag qorantihid.
Haddii uu aaggaaga ka jiro mashruuc habboon waa laguu soo bandhigi karaa taas. Haddii aad ka tirsantihid kooxda mashruuca loola jeedo waxaa dhici karta in la gaaro waqtigi aad ka qeyb qaadan lahayd.
Adigaaga ka qeyb qaata mashruuc ku jiheysan siyaasad la xiriirta suuq shaqada waxaad heli kartaa aktivitetsstöd, utvecklingsersättning ama etableringsersättning.
Marka aad ka qeyb qaadaneysid mashruuc ku jiheysan siyaasad la xiriirta suuqa shaqada waxaad ku jirtaa ceymis.